ချောကလက်ပန်းစည်းတွေနဲ့ချစ်ရတဲ့FANလေးတွေက VALENTINE DAY အတွက် SURPRISE လုပ်သွားလို့ပျော်နေတဲ့ ဟိန်းဝေယံ - သတင်းရွာ
ချောကလက်ပန်းစည်းတွေနဲ့ချစ်ရတဲ့FANလေးတွေက VALENTINE DAY အတွက် SURPRISE လုပ်သွားလို့ပျော်နေတဲ့ ဟိန်းဝေယံ
ရုပ်ရှင်မင်းသားချောလေး ဟိန်းဝေယံကတော့ အနုပညာလောကမှာ နှစ်အတော်ကြာ ရပ်တည်ခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှုများစွာရရှိထားတဲ့ သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ ၊ ကြော်ငြာတွေ များစွာရိုက်ကူးခဲ့ပြီး အခုလက်ရှိမှာလည်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ ဆက်တိုက်ရိုက်ကူးနေပြီး ပွဲအခမ်းအနားတွေကိုလည်း တက်ရောက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ယောကျာ်းပီသတဲ့ မျက်နှာနဲ့ စမတ်ကျစွာဝတ်ဆင်တက်တဲ့ ပုံရိပ်တွေကြောင့် မိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့ ဝန်းရံခြင်းကို ခံရသူပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာ ကျရောက်တဲ့ ချစ်သူများနေ့မှာ မင်းသားချောလေး ဟိန်းဝေယံကို ” ချစ်ခင်ရတဲ့ Fanလေးတွေက Valentine day အတွက်ကြို Surprise လုပ်သွားတယ်. .ပျော်လည်းပျော်သလို ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ဗျာ.. “ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့ အတူ သူရရှိထားတဲ့ ပစ္စည်းအချို့ကို ဓါတ်ပုံလေးတွေရိုက်ပြီး တင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဟိန်းဝေယံရဲ့ ပရိသတ်တွေက ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာနော်……….။ဟိန်းဝေယံက အခုလက်ရှိမှာ အနုပညာအလုပ်တွေကိုသာ ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေပြီး သူအားလပ်တဲ့ အချိန်လေးတွေကို ချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်တွေကို အချိန်ပေးတာကြောင့် ပရိသတ်တွေကလည်း အချစ်ပိုနေမှာ အမှန်ပါပဲနော်။
အခုလည်း သူရဲ့ ပရိသတ်တွေက FValentine day အတွက်ကြို Surprise လုပ်သွားတဲ့ လက်ဆောင်လေးတွေကို ချစ်ပရိသတ်ကြီး ကြည့်ရှုစေနိုင်ရန်အတွက် ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေနော်…..။Source; Heinn Wai Yan’s FB
ရုပျရှငျမငျးသားခြောလေး ဟိနျးဝယေံကတော့ အနုပညာလောကမှာ နှဈအတျောကွာ ရပျတညျခဲ့ပွီး အောငျမွငျမှုမြားစှာရရှိထားတဲ့ သူပဲဖွဈပါတယျ။ ရုပျရှငျဇာတျကားတှေ ၊ ကွျောငွာတှေ မြားစှာရိုကျကူးခဲ့ပွီး အခုလကျရှိမှာလညျး ရုပျရှငျဇာတျကားတှေ ဆကျတိုကျရိုကျကူးနပွေီး ပှဲအခမျးအနားတှကေိုလညျး တကျရောကျနတောပဲဖွဈပါတယျ။
ယောကျြားပီသတဲ့ မကျြနှာနဲ့ စမတျကစြှာဝတျဆငျတကျတဲ့ ပုံရိပျတှကွေောငျ့ မိနျးကလေးပရိသတျတှရေဲ့ ဝနျးရံခွငျးကို ခံရသူပဲဖွဈပါတယျ။
ဖဖေျောဝါရီလထဲမှာ ကရြောကျတဲ့ ခဈြသူမြားနမှေ့ာ မငျးသားခြောလေး ဟိနျးဝယေံကို ” ခဈြခငျရတဲ့ Fanလေးတှကေ Valentine day အတှကျကွို Surprise လုပျသှားတယျ. .ပြျောလညျးပြျောသလို ကြေးဇူးလညျးတငျပါတယျဗြာ.. “ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့ အတူ သူရရှိထားတဲ့ ပစ်စညျးအခြို့ကို ဓါတျပုံလေးတှရေိုကျပွီး တငျထားတာပဲဖွဈပါတယျ။
ဟိနျးဝယေံရဲ့ ပရိသတျတှကေ ခဈြစရာကောငျးလိုကျတာနျော……….။ဟိနျးဝယေံက အခုလကျရှိမှာ အနုပညာအလုပျတှကေိုသာ ကွိုးစားလုပျကိုငျနပွေီး သူအားလပျတဲ့ အခြိနျလေးတှကေို ခဈြရတဲ့ ပရိသတျတှကေို အခြိနျပေးတာကွောငျ့ ပရိသတျတှကေလညျး အခဈြပိုနမှော အမှနျပါပဲနျော။
အခုလညျး သူရဲ့ ပရိသတျတှကေ FValentine day အတှကျကွို Surprise လုပျသှားတဲ့ လကျဆောငျလေးတှကေို ခဈြပရိသတျကွီး ကွညျ့ရှုစနေိုငျရနျအတှကျ ပွနျလညျတငျဆကျပေးလိုကျပါရစနေျော…..။Source; Heinn Wai Yan’s FB